Imisebenzi enomdla kunye neyolisayo yaBatitshala bezeNzululwazi abathathe umhlalaphantsi - Umdala Life
Imisebenzi enomdla kunye neyolisayo yaBatitshala bezeNzululwazi abathathe umhlalaphantsi
Ukuthatha umhlala-phantsi njengomfundisi-ntsapho emva kweminyaka engama-45 kwabonakala kuyingcinga entle. Kodwa ngoku udikiwe kukulila. Ngaba ikhona imisebenzi ekhoyo yootitshala bezesayensi abadla umhlala-phantsi? Ewe zinjalo. Unokufumana amathuba emisebenzi eyahlukeneyo njengomhlala phantsi usebenzisa izakhono zakho zokufundisa isayensi.
Zama ukuQala kuqala
Nangona ukufikelela kubudala bokuthatha umhlala-phantsi lixesha lotshintsho kwaye kuhlala kuyisiqalo sendlela entsha yobomi, uninzi lwabafundi bangaphambili bafuna ukusebenzisa amava abo okufundela kunye nolwazi lwesayensi ukongeza umvuzo wabo wotyalo-mali. Abanye banquma ukuba bangathanda ukuhlala bekhuthele kwindawo yabo yobungcali besayensi, okanye basebenze nolutsha.
Iindawo ezili-10 ezingahlawulisi irhafu yomhlala-phantsi
Igalari yezona ndawo zitshiphu zokuthatha umhlala phantsi
Izipho ezili-10 zeHilarious Retirement Gag
Izikhundla zegumbi lokufundela
Ngenxa yokunqongophala kootitshala besayensi abaqinisekisiweyo kwezinye iindawo zelizwe, ootitshala abadla umhlala-phantsi babuyela kwigumbi lokufundela ngokungesosigxina. Nangona olu khetho lungekabonelelwa kuwo onke amazwe, iya isiba yinto eqhelekileyo. Ootitshala banokuxhasa umvuzo wabo wokuthatha umhlalaphantsi ngaphandle kokulahlekelwa naziphi na izibonelelo zabo. Ukuthandwa kokufundisa ngokungesosigxina kungenxa yenani elonyukayo lootitshala abafikelela kubudala bokuthatha umhlala-phantsi, kudityaniswa nenani elisezantsi labafundi abaphumeleleyo abangena kwicandelo lemfundo yesayensi.
Omnye umsebenzi ovumela ootitshala abathathe umhlala-phantsi ukuba basebenze kwindawo yokufundela kukuthatha indawo yokufundisa. Nangona umvuzo uphantsi, ngokubanzi ungaphantsi kwe- $ 100 ngosuku, ootitshala abaninzi bezesayensi abathathe umhlala-phantsi bayakonwabela ukuba kwigumbi lokufundela ngamanye amaxesha. Nangona kunjalo, njengokungena endaweni, abantu kufuneka balandele iimfuno ezingqongqo zemfundo.
Omnye umsebenzi wootitshala bezesayensi abadla umhlala-phantsi kukuyila kunye nokuphumeza iindibano zocweyo kunye nezifundo zokuphucula uphuculo lomsebenzi, ezinokuthi zithiwe thaca kwizithili zezikolo Abanye bakhetha ukusebenzisa ulwazi lwabo olubanzi kwicandelo elikhethekileyo ukwenza intetho ezikolweni ngezihloko ezithile. Uninzi lwaba bahlohli bahlala bengabacebisi kwizithili zezikolo ngokubhekisele kwikharityhulamu, kuphuculo lwezifundo, kunye nokuphunyezwa kwenkqubo Zininzi izikolo eziqesha ootitshala bezesayensi abathathe umhlala-phantsi ukuba bafundise ootitshala abasandula kuqalisa okanye bandise isiseko solwazi lwabasebenzi abakhoyo ngoku. Sebenzisa iminyaka yamava kunye nolwazi lomxholo katitshala odla umhlala-phantsi ngale ndlela kunceda ukunciphisa utshintsho kunye nokudakumba okuhlala kuva kutitshala ongenamava.
Iiyunivesithi nazo zinamathuba emisebenzi. Umzekelo, kwiYunivesithi yaseNyakatho-mpuma yeIllinois, uqesha ootitshala abathathe umhlala phantsi ukuze babeke iliso kootitshala babafundi. Ukongeza, iikholeji ezininzi kunye neeyunivesithi zinesidingo sokuba oonjingalwazi bokuzalisa bagcwalise ngaphezulu kwesemester okanye ikhosi ethile.
Eminye imisebenzi yaBafundisi bezeNzululwazi abathathe umhlala-phantsi
Kulabo titshala bafuna ukuhlala bethatha inxaxheba kubafundi, kodwa kungenjalo kwigumbi lokufundela, ukufundisa kunokuba ngowona msebenzi ugqibeleleyo. Amaziko okufunda ahlala efuna abafundi abaqeqeshiweyo bezesayensi abaphakathi nabaphezulu. Kuxhomekeke kwinkampani, ukufundisa kunokwenzeka ekhayeni lomfundi, kwilayibrari okanye kwiziko lokufunda. Ootitshala bezesayensi abathathe umhlala-phantsi nabo banokufundisa ngasese.
Elinye ithuba lomsebenzi elivumela ootitshala abadla umhlala-phantsi ukuba basebenze nabantwana bayalela e-Chicago-based IZiko leNzululwazi leMad , eneendawo kwilizwe lonke. Le yinkqubo yasemva kwesikolo yabantwana abasaqala egxile kwimisebenzi eyonwabisayo kunye nemfundo.
Amaziko Olondoloo Lwembali Nolondolozo Lwendalo
Ootitshala abaninzi abathathe umhlala-phantsi bayakuthanda ukusebenza kulondolozo lwendalo okanye kwiimyuziyam. Uxanduva lwabo lunokubandakanya:
Ukulungiselela nokunikezela iindibano zocweyo.
Ukukhokela ukhenketho lweqela.
Ukubamba imibuzo kunye neeseshoni zokuphendula.
Inkqubo ye- IMyuziyam yaseHoratio Colony kunye noLondolozo lweNdalo eKeene, eNew Hampshire, kunye I-Sunken Forest Preserve kwiSiqithi soLwandle seSizwe soMlilo , eyinxalenye yeeLong Island Nature Preserves yaseNew York, yimizekelo emibini yolu hlobo lweziko lendalo.
IiMyuziyam ezinje nge I-Sag Harbour Whaling kunye neMbali yeMbali eSag Harbour, eNew York, kunye IMyuziyam yaseBrooklyn eBrooklyn, eNew York, yimizekelo yemibutho eqesha ootitshala bezesayensi abathathe umhlala-phantsi njengezikhokelo zabakhenkethi kananjalo nokwenza ucweyo kumaqela. Kwabo titshala bakhetha ixesha lonyaka, ingqesho yexeshana, imisebenzi kwizitiya zezityalo zinokuba lukhetho olufanelekileyo. Amathuba engqesho abandakanya ukukhathalela izityalo, ukubonisa iindibano zocweyo, kunye nokhenketho oluphambili.
Ootitshala bezesayensi abathathe umhlala-phantsi abakuthandayo ukubhala banokukhetha isikhundla njengombhali wencwadana yemifanekiso yezenzululwazi nezonyango. Iinkampani ezinje Ifoto Thatha i-USA , imifanekiso yelayisenisi yokusetyenziselwa urhwebo kunye nokuhlela. Umbhali wenkcazo kufuneka achaze ngokuchanekileyo nangokucacileyo imifanekiso yezonyango kunye neyebhayoloji. Imifanekiso igubungela uninzi lweendawo zesayensi kubandakanya uphando ngemfuza, microscopy, utyando, uvavanyo lokuqonda isifo, i-biochemistry kunye ne-anatomy.
Mininzi eminye imisebenzi edla ngokubhenela ootitshala besayensi abadla umhlala-phantsi. Omnye umzekelo kukuma koqeqesho kwabanye, njengabasebenzi kwiAddus Health Care, apho baqeqesha khona abancedisi bezempilo ekhaya. Enye into enokwenzeka kukuvavanya kunye nokufumana amanqaku kwizincoko kunye neemvavanyo zeenkampani kwilizwe liphela, ezinje ngeRiverside Publishing.
Imisebenzi yoTitshala eSethathe umhlala phantsi
Indawo Ukuseta iklasi Umvuzo
Utitshala wethutyana Ewe iyahluka
Umkhapheli hayi $ 10 ukuya kwii-75 zeedola ngeyure
Utitshala obambeleyo Ewe $ 50 ukuya kwi-90 yeedola ngosuku
Umphathi wootitshala babafundi hayi $ 2,500 ukuya kwi- $ 2,850 ngabafundi aba-3
Umcebisi hayi iyahluka
Isikhokelo sokhenketho lwemyuziyam hayi iyahluka
Umbhali wengcaciso hayi iyahluka
Umqeqeshi hayi iyahluka
Uvavanyo kunye nomvavanyi wezincoko hayi iyahluka
Umbutho wooTitshala abathathe umhlala phantsi eChicago Uluhlu lwemisebenzi yootitshala besayensi.
Ootitshala.net unikezela ngezixhobo zokucebisa.
Imisebenzi yomhlala-phantsi kwi-Intanethi yindlu yokucoca amathuba amaninzi.
Iinkonzo Zematriki Citizen Abantu Abadala Iibhodi Imidlalo Amakhandlela Imiboniso Yesilayidi Makeup Tips Malunga Mortgages
umphefumlo uyawushiya umzimba emva kwexesha elingakanani emva kokufa?
iimpawu inja yam iyabeleka
uyibuyisela njani ikork kwibhotile yewayini
ukucoca njani ukubhaka kwigrisi